Na-atụgharị uche Taa Na Onye Know Maara Onye O Yiri Ka Ọ Bụghị Amata Ya na Mmehie nke Mmehie Ma Nwee Olileanya Na-efunahụ Ya | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Chee echiche taa banyere onye ị maara nke yiri ka ọ bụghị nanị na ọ nọ n'ọnyà nke mmehie ma nwee olileanya.
di Paolo Tescione - Jenụwarị 15, 2021
Ha bịara wetara ya onye ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, nke mmadụ anọ buuru. Ebe ha na-enweghị ike ịbịaru Jizọs nso n’ihi igwe mmadụ ahụ, ha meghere elu ụlọ ya. Mgbe ha gafesịrị, ha buturu matarasị ahụ onye ahụ mkpọnwụ dina n’elu ya. Mak 2: 3–4
Ihe akpọnwụ nke a bụ akara nke ụfọdụ mmadụ na ndụ anyị ndị na-enweghị ike ichigharịkwuru Onyenwe anyị site na mbọ nke aka ha. O doro anya na onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ chọrọ ọgwụgwọ, mana enweghị ike ịbịakwute Onye-nwe anyị site na mbọ ya. Ya mere, ndị enyi nke onye ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ kpọgara Jizọs, meghee elu ụlọ ya (ebe ọ bụ na e nwere igwe mmadụ dị otu a) ma wedaa nwoke ahụ n’ihu Jizọs.
Ahụ mkpọnwụ nke nwoke a bụ ihe nnọchianya nke otu ụdị mmehie. O bu nmehie nke mmadu choro mgbaghara ma o nweghi ike ichigharikwute Onye nwe anyi site na mgbali nke aka ha. Dịka ọmụmaatụ, ị addictionụ ọgwụ ọjọọ bụ ihe nwere ike ịchịkwa ndụ mmadụ nke ukwuu nke na ha agaghị emeri ụdị ahụ riri ahụ site na mbọ nke ha. Ha chọrọ enyemaka nke ndị ọzọ ka ha nwee ike ichigharịkwuru Onyenwe anyị maka enyemaka.
Onye ọ bụla n’ime anyị ga-ewere onwe ya dịka ndị enyi nke ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na anyị ahụ onye ọnya daba na mmehie, anyị na-ekpe ya ikpe ma jụ ya. Mana otu ọrụ ebere kachasị ukwuu anyị nwere ike ịnye ọzọ bụ inyere aka nye ha ụzọ ha chọrọ iji merie mmehie ha. Enwere ike ịme nke a site na ndụmọdụ anyị, ọmịiko anyị na-enweghị mgbagha, ntị na omume ikwesị ntụkwasị obi nye onye ahụ n'oge ha nọ na mkpa na obi nkoropụ.
Olee otu i si emeso ndị ọnya mmehie pụtara? You na-ewepụ anya gị tụgharịa? Ka ị na-ekpebisi ike ịnọ ebe ahụ iji mee ka ha nwee olileanya na inyere ha aka mgbe ha nwere obere ma ọ bụ enweghị olileanya na ndụ iji merie mmehie ha? Otu n’ime onyinye kasịnụ ị g’enye onye ọzọ bụ onyinye nke olile anya site na ịnọnyere ha iji nyere ha aka ichigharịkwuru Onyenwe anyị.
Chee echiche taa banyere onye ị maara nke na-egosi na ọ bụghị naanị na ọ dabara na mmehie nke mmehie, mana enwekwaghị olileanya nke imeri mmehie ahụ. Hapu onwe gi n’ekpere n’ebe Onye-nwe-ayi nọ ma tinye n’omume amara nke ime ihe obula na ihe nile g’eme ka ha nyere Onye nwe anyi aka.
Jisusm dị oke ọnụ ahịa, mejupụta obi m na afọ ojuju n’ebe ndị chọrọ Gị nọ mana ọ dị ka enweghị ike imeri mmehie nke ndụ ha nke na-ekewapụ ha n’ebe ị nọ. Mee ka m kwenyesi ike na ha ga-abụ ọrụ ebere nke na-enye ha olile anya ha chọrọ inye Gị ndụ ha. Jiri m, onyenwe m hụrụ n’anya, ndụ m dị n’aka gị. Jesus ekwere m na gị.
Na-atụgharị uche: jiri obi ike na ịhụnanya hụ obe
Igbu Onwe Onye: Ihe Wardọ Aka ná Ntị na Mgbochi
Ntụgharị uche nke ụbọchị: ezigbo ịdị ukwuu
Mmekọrịta dị ogologo, otu esi ejikwa ha?